Ireo no andiany nomena tamin'ny 2022 Golden Globes | Bezzia
Maria vazquez | 13/01/2022 12:00 | ankehitriny
La andiany faha-79 amin'ny Golden Globes, ny loka avy amin'ny Hollywood Foreign Press Association, dia natao tamin'ny 10 Janoary. Tsy nisy ny karipetra mena na ny gala araka ny efa nampoizina fa natao ho an’ny tena manokana ny fanaterana izay nanaovana ny famakiana ireo mpandresy.
Taorian'ny fiampangana ny kolikoly sy ny tsy fisian'ny fahasamihafana, ny Golden Globes dia nozaraina tamin'ny tsy firaharahana lehibe na dia eo aza ny zava-misy fa ny haino aman-jery tsy nisalasala niantso ny mpandresy. Ary ao amin'ny sokajy Televiziona dia nisy iray tsy azo lavina: HBO's 'Succession'.
3 Ny lalamby ambanin'ny tany
Ny Fandimby no tena tian'ny sokajy fahitalavitra ary tsy niala maina. ny tantaram-pianakaviana hbo Tsy ny Golden Globe ho an'ny andian-tantara tsara indrindra ihany no nahazoany fa loka roa ihany koa ho an'ireo mpandray anjara ao aminy: Sarah Snook, ho an'ny mpilalao sarimihetsika mpanohana tsara indrindra, ary Jeremy Strong ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra.
Ny andiany dia mitantara ny Fahoriam-pianakaviana Roy, Logan Roy sy ny zanany efatra. Ny voalohany dia manana fivondronan'ny orinasa haino aman-jery audiovisual sy fialamboly izay efa nofinofin'ny zanany efatra nolovaina. Araka izany, ny andian-tantara dia mamakivaky ny fiainan'izy ireo eo am-pandinihana ny ho avy rehefa miala amin'ny orinasa ny patriarika ao amin'ny fianakaviana.
Ny tantara noforonin'i Adam McKay nifaninana tao amin'ny sokajy misy azy miaraka amin'ny 'Pose', 'The Squid Game', 'The Morning Show' ary 'Lupine', saingy tsy afaka nanao na inona na inona nanohitra an'ity andiany mitambatra ity izy ireo izay ny vanim-potoana fahatelo, feno tsy ampoizina sy fanasoniavana vaovao, dia namela ireo mpandray anjara tamin'ny lalao. toe-javatra sarotra be.
Nandresy toy izany ny hacks hatsikana tsara indrindra amin'ny taona mialoha ny fitiavan'i Ted Lasso. Ny andiany dia nitarika ny tampon'ny andiany tsara indrindra amin'ny taona nandritra ny volana maromaro, saingy tamin'ny 15 Desambra vao afaka nahita izany izahay tany Espaina. HBO Max.
Toko folo no mandrafitra ny vanim-potoana voalohany amin'ny andiany izay zara raha 25 minitra ny halavany. Noforonin'i Lucia Aniello, ny andiany dia manana ny maha-protagonista azy mpanao hatsikana roa natao hifankahazo. Deborah Vance, diva monologue izay manao fampisehoana isan-kariva amin'ny taona ao amin'ny casino Las Vegas, dia eo amin'ny lafiny iray amin'ilay tetika. Ava Daniels, fampanantenana hatsikana tanora izay nahita ny asany nohafohezina taorian'ny 'bitsika' mampalahelo, ho an'ny hafa.
Manoloana ny mety ho fanafoanana ny sasany amin'ireo isany, i Deborah Vance, nilalao an'i Jean Smart, dia voatery nanaiky ny fanampian'ny rookie Ava Daniels, nilalao an'i Hannah Einbinder. Ny fifandraisan'izy ireo Ho sarotra amin'ny voalohany, fa hihatsara ve izany?
Nahazo loka telo tamin'ny Emmy Awards farany indrindra ilay andiany navoaka voalohany tany Etazonia tamin'ny 13 Mey 2021, izay narahin'ny Golden Globe ho an'ny andiany tantara an-tsary na mozika tsara indrindra. Hanandrana ve ianao?
Ny lalamby ambanin'ny tany
Miorina amin'ny boky mitovy anarana Avy amin'i Colson Whitehead nahazo ny loka Pulitzer ary noforonin'i Barry Jenkins, talen'ny Moonlight nahazo ny Oscar, The Underground Railroad dia nahazo ny Miniseries tsara indrindra tao amin'ny Golden Globes.
Ity miniseries Amazon Prime Video ity dia mampahafantatra antsika an'i Cora (lalaovin'i Thuso Mbedu), andevo mitsoaka avy any an-tanimbary firenena atsimo izay onenany sy iteteny fanjakana samihafa noho ny lalamby ambanin'ny tany mistery. Hevitra novolavolain'i Whitehead mba hamaritana lalana voalamina tsara izay nanamora ny fahafahan'ny andevo.
Ary izany dia tamin'ny fiandohan'ny taonjato XIX noho ny fanampian'ireo izay nanohitra ny fanandevozana, a tambajotra miafina hanampy amin'ny fitarihana ny andevo ho any amin'ny fanjakana afaka ao amin'ny firenena. Araka izany, teo anelanelan’ny taona 1810 sy 1862 ity tambazotran’ny “saofera” sy ny “maîtrise de station” ireo, ny olona nitari-dalana sy ny olona nanafina ireo nandositra tao an-tranony, dia tombanana ho 100.000 eo ho eo no avotra.
Ankoatra ny fanehoana an-kolaka ny fiainan'ny andevo any amin'ny toeram-pambolena, ny fanoloran-tena amin'ny zava-misy amin'ny majika hampiditra singa matanjaka izay mamela ny fampifandraisana ny lasa sy ny ankehitriny amin'ny fiainan'ny fiarahamonina mainty hoditra amerikana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Ireo no andiany nomena tamin'ny Golden Globes 2022